UNFOLDED: oo ah barxad cusub oo loogu talagalay maaraynta xogta dhulka - Geofumadas
Maarso, 2021 dhowr
Qaybtii 6aad ee Majaladda Twingeo, waxaan awoodnay inaan dhadhansiino waxa madal cusub ee loogu talagalay maaraynta xogta durugsan Studio isfuray. Mashruucan hal-abuurnimada ah, tan iyo Febraayo 1, 2021, wuxuu dadka ka dhigayay inay ka hadlaan aaladaha suurtagalka ah ee ay u fidiso wax ka qabashada iyo maareynta goobaha xogta ballaaran.
Waxay ka hadlaysaa sida abuurayaasheeda ay u bilaabeen inay horumariyaan mashruucan ilaa ay ka hirgaleen Unfolded, oo ku saleysan ilaha teknoolojiyadda geospatial ee furan sida kepler.gl, deck.gl iyo H3. Madal ujeedadeedu ugu weyn tahay maareynta wax ku oolka ah ee Xogta Weyn, oo leh qaab dhismeed dhammaad illaa dhammaad iyo wareegyo isdaba joog ah si loo farsameeyo xog uruurin ballaaran. Habka asaasiga ahi wuxuu ku saleysan yahay awooda shabakadaha H3 ee laba geesoodka ah.
Shabakadan H3 waa nidaam tilmaam juqraafi ahaaneed, tanna dhulka dushiisa waxaa loo qaybiyaa unugyada kaladuuban ee kala duwan, mid kasta oo unugyadan ka mid ah waxaa loo qaybin karaa kuwa kale iwm. Waxaa Uber u sameysay aragga iyo habeynta xogta meelaha, iyo sidoo kale maareynta suuqa firfircoon - bixinta iyo baahida.
Qaybta aan la fureyn waxaad ku abuuri kartaa khariidado dhowr guji, iyo biraawsarka. Iyada oo leh astaamaha aasaasiga ah ee 8, Istuudiyaha Fudud ayaa ogolaanaya:
Abuur khariidado dadaal la'aan
Bandhigga sahaminta weyn
Falanqaynta juquraafi ahaan awood leh si ay uga caawiso adeegsadayaasha inay ogaadaan fikradaha
Kaydinta daruuraha ee xogta geospatial
Hal-guji daabacaadda khariidadda
Soo gelitaanka fudud ee qaababyada xogta geospatial
Otomaatiga si loo helo xogta gudaha iyo dibedda qalabka
Siyaabaha loo abuuro codsiyada gaarka ah khariidadaha
Aasaasayaasha aan la shaacinin ee kala ah Isaac Brodsky, Ib Green, Shan He, iyo Sina Kashuk waxay soo saarayeen teknoolojiyad heer sare ah sida kepler.gl, deck.gl, iyo H3 in ka badan nus sano oo ay hada ku biireen xoogaga dib u soo nooleynta gorfaynta dhulka.
Laga soo bilaabo koontada Google ama adoo galaya emayl, astaan ​​ayaa loo sameeyay si loo bilaabo sameynta khariidado. Sidoo kale, waxaa suurtagal ah in lagu xiro goobaha shaqada ama qalabka maamulka kooxda sida "Slack". Sidoo kale, waxaa jira guddi maareyn xog ah oo ku jira daruuraha, dhammaan xogta la geliyay barxadda waa mid gaar ah, illaa adeegsadaha looga baahan yahay inuu la wadaago iyada oo loo marayo URL, sheeko, emayl, shaashad ama shabakad bulsheed (twitter, LinkedIn, Facebook Reddit).
Macaamiisha meheraddu waxay ka heli karaan xogta barxadda aan la furin iyada oo loo marayo Xogta SDK - REST API - iyada oo loo marayo shabakadda shabakadda ama amarro gaar ah. SDK-kan wuxuu awood u siinayaa isdhexgalka khariidadaha, xogta, adeegyada, iyo qulqulka shaqada. Waxay sidoo kale fududeeysaa abuurista khariidado daabacan, isdhexgal ama qaabab waxayna siisaa xakamaynta xogta la soo bandhigay ama aan ku jirin khariidada.
Markaad la falgaleyso barxadda, is-dhexgalka iyo howlaha ay bixiso ayaa lagu sifeeyay, iyo sidoo kale farqiga ay u leedahay desktop-ka dhaqameed sida ArcGIS ama QGis tusaale ahaan. Waxay isku daraysaa dhammaan awooda GIS-ta caadiga ah iyo tikniyoolajiyada cusub iyo kuwa cusub.
Istuudiyaha faafay looma jeedin kiisaska adeegsiga GIS ee soo jireenka ah. Waxay diirada saareysaa falanqaynta xogta weyn iyo xalinta dhibaatooyinka adag ee geeska marka laga eego aragtida saynisyahannada xogta iyo falanqeeyayaasha.
Astaamaha sida falanqaynta kumeelgaarka ah ayaa lagu sifeeyay, waa lama huraan markaad haysato hal ama in kabadan oo xog ururin ah oo aad rabto inaad kudayasho isbeddellada qaab dhaqso iyo xamaasad leh. Sidoo kale, suurtagalnimada in lagu dhaqaajiyo falanqeyntan ku meel gaarka ah ayaa sidoo kale lagu soo daray barxadda.
Sidoo kale, qoraal ayaa laga tagay halka aasaasayaasha Unfolded ay la falgalaan isticmaaleyaashooda si ay uga helaan jawaab celin wanaagsan oo ku saabsan howlaha barmaamijka. Sidoo kale, waxay sii wadaan tijaabinta si loogu daro aalado cusub ama astaamo ka dhigaya waayo-aragnimadu inay sii kobciso.
Dhinaca kale, kuwa ku cusub Unolded, waxay fursad u leeyihiin inay dib u eegaan casharrada la xiriira: ku darista xogta khariidadaha, sahaminta xogta, ku biirista xogta ama animations-ka. Waa madal ballanqaadaysa inay layaab weyn ku keento bulshada gorfeeya xogta.
Looma baahna in lagugu martiqaado inaad aqriso daabacaddan cusub ee Magazine Twingeo. Waxaan xusuusan nahay inaan u furan nahay helitaanka dukumiintiyada ama daabacadaha aad rabto inaad ku muujiso joornaalka. Nagala soo xiriir e-mayllada eded@geofumadas.com iyo editor@geoingenieria.com.. Joornaalka waxaa lagu daabacay qaab dijitaal ah -halkan ka hubi- Maxaad sugeysaa inaad soo dejiso Twingeo? Nagala soco LinkedIn wixii cusbooneysiin dheeraad ah.
Post Previous" Hore Dibloomada - Khabiirka Dhismaha ee BIM
Post Next Sheekooyinka ganacsiga. Geopois.comNext »